Ilawshiyo dhawaa ma umul baa?
arlaadi October 28, 2018 No Comments
Shacabka Koonfur galbeed marnaba ma ilaawi doonaan sidii arxan darada aheyd ee loo kala qeybiyay. Walaalo wada dhashay baa lakala jaray rabitaaankii shacabka ayaa la hor istaaagay sanadkii 2014.
Dadkii kala qeybiyay waxaa hormuud u ahaa xildhibaan Cabdalla xuseen Cali iyo Xil. Ibraahim yarow Isak oo labaduba xiligaasi ahaa wasiiro shacabka koonfur galbeed ku qasbay weliba aan ognahay dad masaakiin ah aanan waxba galabsan in amaro ay bixiyeen lagu dilay oo maanta mowta ah qaar kalana ay maanta naafo u noqdeen dhaawacyo soo gaaray.
Dadkaasi waxaa lagu dulmiyay waa awoodda dowladnimo. Waxaasi oo idil waxaa kasii daran dadkii noocaasi ahaa in ay maanta rabaan shacab walaalo ah in ay iska hor keenaan oo ay colaad kala dhex dhigaaan.
‘Hadiii aynu nahay shacabka Koonfur galbeed waxaan u digeynaa dadkaasi iyo cida dabada ka riixeysa, waxaan leenahay ma aqbali doono in muwaadin reer Koonfur galbeed la wax yeeleeyo waxaan kaloo xasuusinayaa madaxweynaha imaan doono in shuhadadii 2014 dadkii ka dambeeyay in cadaalada la horkeeeno’.
Shacabka Koonfur galbeed